नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी, वाणिज्यमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी ! | Diyopost
नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी, वाणिज्यमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी !
काठमाडौं, ४ असोज । नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो ।
‘स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरव्यावसायिक काम गरेको भनेर ती उजुरी परेका हुन् । मिडियाले उठाएको कुरा पुष्टि हुँदै छ,’ विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईले भने, ‘ती व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको नाम र नम्बर पाएका छौं । दिनमा २र३ जनालाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । अनुसन्धान जारी छ ।’
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । प्रायः कम्पनीले नेटवर्किङ गरिरहेको भेटिएको छ । यीबाहेक विभागबाट इजाजत नलिई पनि अवैध धन्दा गरिरहेको पाइएको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ कारोबार पुनः मौलाएको उजुरी परेपछि विभागले सचेत हुन विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ तथा नियमावली, ०७६ ले पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
केही नेपाली कम्पनी तथा व्यक्ति तथा विदेशीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको गुनासोरउजुरीहरू यस विभागमा आएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुनासोरउजुरीका आधारमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीउपर अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिन भइरहेको छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।